Kitra – «Orange Pro league»: mety hatao «Play off» ny ho tohin’ny fifaninanana | NewsMada
Kitra – «Orange Pro league»: mety hatao «Play off» ny ho tohin’ny fifaninanana
Hijery miaraka izay fomba hahafahana manohy ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara “Orange pro league”, taranja baolina kitra ny tompon’andraikitra mpikarakara sy ireo ekipa mifaninana amin’izany.
Ho fantatra amin’izao faran’ny herinandro izao ny fotoana hanohizana ny fifanintsanana hiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, taranja baolina kitra “Orange pro league”. Hisy mantsy ny fivoriana iarahan’ny Association du club de foot-ball elite de Madagascar (CFEM), misahana ny fifaninanana sy ireo klioba 12 miatrika izany, amin’ity asabotsy ity. Raha ny fanadihadiana, mety hisy fomba na “formule” vaovao amin’ny ho tohin’ny lalao, izay nitsahatra teo amin’ny andro faha-15 noho ny fisian’ny valanaretina covid 19. Mbola misy eo amin’ny andro fito eo izany sisa tsy tontosa.
Araka ny heno, mety hatao “Play-off” ny tohin’ny “Orange pro league” ka hiatrika izany ireo ekipa valo voalohany. Hatao lalao fifanintsanana avy hatrany izany ka mihintsana izay resy. Raha tsiahivina ireo ekipa valo voalohany, mitarika ny CNaPS Sport Itasy, manana isa 33, arahin’ny Cosfa, isa 31. Fahatelo, ny Ajesaia nahazo isa 30 ary fahefatra ny Fosa Jr Boeny, isa 30 ihany koa, saingy tara lalao iray. Fahadimy ny Elgeco Plus, manana isa 26. Fahenina ny AS Adema, isa 25 ary fahafito ny AS Jet Mada Itasy, nahazo isa 24. Eo amin’ny laharana fahavalo ny 3FB Toliara, isa 18.
Vahaolana re ihany koa ny mety hanaovana ny lalao mandroso fotsiny ho an’ireo tsy tontosa, ka ho tompondaka izay ekipa be isa indrindra. Mbola vinavina izany hatreto fa hiankina amin’ny fanekena na fandavan’ireo klioba 12.
Etsy an-kilany, mbola hampanano sarotra ho an’ireo ekipa ny ho enti-manana hanohizana ny fihaonana, izay mandalo fahasahiranana ara-bola, amin’izao fotoana izao. Ankoatra izay, betsaka amin’ireo mpilalao no nanatona ny faritra niaviany ka tsy mbola namonjy ny ekipany, tsy afaka akory niatrika fanazarantena.